အောင်မြင်ခြင်းအတွက် စိတ်ခွန်အားပေးတဲ့စာတစ်ပုဒ် - Thutazone
လူတိုင်းသည် ကိုယ့်ဘ၀ကို အောင်မြင်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။ ဒါပေမယ့်လူတိုင်းမအောင်မြင်ကြဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကိုယ့်ဘ၀ကို ကိုယ်အရင်သိအောင်မလုပ်ကြဘူး၊ ကိုယ့်နဲ့သင့်တော်တဲ့အလုပ်၊ ကိုယ်ရရှိတဲ့ဝင် ငွေကိုလည်း မချိန်တွယ်မစဉ်းစားတတ်ဘူး။ အောင်မြင်လိုလျင်အချက်(၄)ချက်ကို အရင်ကြည့်ရအောင်။
အခုငါဘယ်ဘ၀ရောက်နေတာလဲ ? အခုငါသုံးနေတဲ့ငွေဟာ ငါ့ဘ၀နဲ့ကိုက်ရဲ့လား? ငါ့အလုပ်ဝင်ငွေနဲ့ကိုက်ရဲ့လား? ငါ့ဘ၀နဲ့သင့်တော်ရဲ့လားဆိုတာကိုပေါ့၊
(၂) ကြိုးစားပါ —
ကိုယ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကို ပျော်သည်ဖြစ်စေ မပျော်သည်ဖြစ်စေ ကိုယ်လုပ်ရတဲ့အလုပ်ကို ကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ရတယ်၊ ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက်ပေါ့ ၊ ကိုယ်ကသူများဆီမှာလုပ်ရသည်ဖြစ်စေ ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်စေ ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ် အဓိကကတော့ သူများအလုပ်ဆိုရင်ပိုပြီးတော့အရေးကြီးတယ်၊ ( ကြိုးစားသူအတွက်အခွင့်ရေးဟာ မလွဲမသွေရောက်လာမဲ့ အရာပါပဲ )
(၃) ယုံကြည်အောင်နေပါ —
ကိုယ်ကအလုပ်သမားဖြစ်ဖြစ် အလုပ်ရှင်ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ရဲ့အကြီးအကဲ ကိုယ့်လက်အောက်ငယ်သားတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကို ရဖို့လိုအပ်တယ် အဓိက ကတော့ ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်က ယုံကြည်နေဖို့လိုအပ်တယ်။ အလုပ်ရှင်အများစုဟာ ယုံကြည်မှုတွေနဲ့ပဲတည်ဆောက်တာများတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ရဲ့ ကတိကို မဖျက်ဆီးပါနဲ့၊ ကိုယ်မပေးနိုင်တဲ့ကတိကိုလည်း မပေးနဲ့ ပေးပြီးရင်လည်းတည်အောင်လုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်၊ ဒါမှယုံကြည်မှာလေ။
(၄) မျက်နှာထားကို ပြင်ပါ —
ကံ ခြင်းတူလျှင် ဥာဏ်ရှိသူက အမြဲအနိုင်ရတယ်၊ ဥာဏ်ခြင်းတူလျှင် ၀ိရိယရှိသူက အမြဲအနိုင်ရတယ်၊ ၀ီရိယရှိသူခြင်းတူလျှင် စည်းကမ်းရှိသူက အမြဲအနိုင်ရတယ်၊ စည်းကမ်းရှိသူချင်းတူလျှင် စေတနာရှိသူက အမြဲအနိုင်ရတယ်၊ စေတနာရှိသူခြင်းတူလျှင် ရိုးသားဖြောင့်မတ်သူက အမြဲအနိုင်ရတယ်၊ ရိုးသားဖြောင့်မတ်သူခြင်းတူလျှင် အပြောချိုသာသူက အမြဲအနိုင်ရတယ်၊ အပြောချိုသာဖို့ဆိုရင် မိမိမျက်နှာအများကြီးမူတည်တယ်လေ ၊ ချိုသာတဲ့မျက်နှာနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံရင် ၅၀% က အလိုလို အောင်မြင်ပြီးသားပါ။
အလုပ်လုပ်နေတဲ့လူဟာ ကျရှုံးသည်ဖြစ်စေ ၊ အောင်မြင်သည်ဖြစ်စေ ၊ ဂုဏ်ယူနေရမယ် ။ ကျရှုံးမှာကြောက်လို့ အလုပ်ကို မလုပ်တော့ဘူးဆိုရင် ဘာမှလဲဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလေ ၊ ´´သစ်ပင်မြင့်လေ လေတိုက်ခံရလေ´´ တဲ့ လေဆိုတဲ့လောကဓံကို ကြေက်နေရင် ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာ ပေါ်လာမှာမဟုတ်တော့ဘူးလေ ၊ လောကဓံကို ခံနိုင်အောင်မွေးမြူရမယ် ။
ကိုယ်ကျရှုံးခဲ့ရင်တောင် ဘာတွေပဲရှုံးရှုံး အဲဒီအရှုံးထဲက အမြတ်ကို ရှာဖွေတတ်ရမယ်လေ ။ ကိုယ်လုပ်လိုက်တဲ့အမှား ကဘာလဲ နောက်တခါ ဘယ်လိုမမှားအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာကို လေ့လာနေရမယ် ဘာကြေင့်လဲဆိုတော့ အရှုံးဆိုတာ အမြဲမှ မဟုတ်တာ ရှုံးတယ်ဆိုတာ အများအားဖြင့်ငွေကြေးပါပဲ၊ ဒါကြောင့်စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့ ၊ စိတ်ဓာတ်ကျတယ်ဆိုတာ လူညံ့တွေအလုပ်ပါ ။
ငွေကြေးရှုံးတယ်ဆိုတာ အသေးအမွှားပါပဲ၊ ငွေ ဆိုတာပြန်ရှာလို့ရတဲ့အရာပဲလေ ။ အဓိက ကတော့စိတ်ဓာတ် မကျဖို့ပဲ စိတ်ဓာတ်ကျရင်တော့ မင်းဘ၀ဟာ ရေစုံမျောပြီသာမှတ်တော့ ။ ဒီဂရီတွေရသည်ဖြစ်စေ မရသည်ဖြစ်စေ အခုလောလောဆယ် ဘယ်လောက်အောင်မြင်နေသည်ဖြစ်စေ စိတ်ဓာတ်သာကျနေရင် အဲဒီလူရဲ့ ဘ၀ဟာ လုံးဝဆုံးရှုံးနေပြီလေ ၊ ကိုယ်ကစိတ်ဓာတ်ကျနေရင် ကိုယ်စိတ်ဓာတ်ကျနေသည့်အတွက် ကိုယ်မှာစိတ်ချမ်းမှုဆိုတာ ဘယ်တော့မှ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး ၊ ငွေကြေးအောင်မြင်ဖို့ဆိုရင် ကိုယ့်စိတ်ကို ကြည်နေဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်လေ။
ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာနေရင် ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ကလဲ အဆင်ပြေနေမှာပဲလေ။ အဆင်ပြေမှလဲ စိတ်ကချမ်းသာမှာမဟုတ်လား ? ဘ၀ဆိုတာက တစ်ခါတလေ အရမ်းကိုပျင်းစရာကောင်းတယ်။ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ် လုပ်ချင်တာတွေမလုပ်ရနဲ့ပေါ့။ ဒါပေမဲ့လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင် တာဝန်ဆိုတာလဲရှိစမြဲ မဟုတ်လား ? ကိုယ်ပျော်သည်ဖြစ်စေ မပျော်သည်ဖြစ်စေ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုတော့ အောင်မြင်အောင်လုပ်ရမှာဟာ လူ့ဘ၀ရဲ့တာဝန်ပါပဲ ။
ဒါကြောင့်ကိုယ်လုပ်ချင်တာမလုပ်ရရင် လုပ်ရတဲ့အလုပ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်လေ အဲဒါဟာလူ့အရည်အချင်းပဲပေါ့ ၊ အရေအတွက်တွေဘယ်လောက်များများ အရည်ချင်းမရှိလျှင် အဲဒီလူရဲ့ဘ၀ဟာ အောင်မြင်ဖုိ့မလွယ်ပါဘူး ၊ နောက်ပြီးစိတ်ဓာတ်ကိုလဲ မာကြောအောင်လေ့ကျင့်ကြရမယ် ၊ ဥပမာပြောရရင် သူ့အလိုလိုရှိနေတဲ့ (အပေါက်မရှိတဲ့) သစ်သားတစ်ခုဟာ သူထက်မာကြောတဲ့သံ နဲ့တွေ့လျှင် နေရာဖယ်ပေးကြရတယ် အဲဒါဟာဘာကိုပြသလဲဆိုရင် မာကြောတဲ့အရာနဲ့တွေ့ရင်ပျော့ ပြောင်းတဲ့အရာတွေဟာ အလိုလိုနောက်ဆုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားကြတယ်မဟုတ်လား? ဒါဟာလောက နိယာမပဲလေ ၊
နောက်ပြီးဘယ်လိုလူမျိုးဟာ ကိုယ်အပေါ်ကောင်းတယ်။ အထောက်အပံ့ရတယ်ဆိုတာကိုလည်း ဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်ရမယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်ရဲ့အကြီးကျယ်ဆုံးရန်သူဟာ ကိုယ်နဲ့အနီးဆုံးလူဖြစ်နေတတ်တယ်။ ကိုယ်နဲ့အနီးဆုံးလူကြောင့်ကိုယ်ဘ၀တိုးတတ်နိုင်သလို ကိုယ်ဘ၀ကို တစ်စစီချိုးဖျက်မဲ့သူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လေ၊ မြန်မာစကားပုံကတော့ “ကျွန်ယုံတော့ တစ်ဖက်ကန်း သားသမီးယုံတော့ စုံလုံးကန်း´´ အဲဒါကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင် ကိုယ်အနှီင်္းအနားမှာ ရှိတဲ့သူကပဲ ကိုယ်ဘ၀ကို ဖျက်ဆီးနိုင်တယ်ဆိုတာပဲ။ ဒါကြောင့်ကိုယ့် ကိုယ်ကိုပဲ ယုံကြည်ဖို့လိုတယ်။
တစ်ခါတစ်လေ အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းတွေကြောင့် ကိုယ့်ဘ၀ပြောင်းလဲတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါဟာ အထောက်ပံ့မျှသာပါပဲ အဓိကကတော့ ကိုယ်ဟာကိုကြိုးစားရမှာပဲလေ။ သူငယ်ချင်းဆိုတာ အကောင်းအဆိုးကိုပဲ မျှဝေခံစားပေးလို့ရတယ်။ အဓိကကတော့ ကိုယ်သာကိုပဲမဟုတ်လား? ကိုယ်အောင်မြင်ရင် ကိုယ်ကအဓိကပဲခံစားရတာ။ ကျန်တဲ့မိဘသူငယ်ချင်းဆိုတာ အဖျားလောက်ပါပဲ — ငါဝမ်းနည်းပါတယ်“ ဆိုတာလောက်ပဲပြောကြမှာလေ ၊ တကယ်တော့ ကိုယ်ဟာကိုပဲခံစားရမှာပဲလေ မဟုတ်လား?
နောက်ထပ် ကိုယ့်ဘ၀ကို အကြီးကျယ်ဆုံးသောအမှားကတော့ အချစ်နောက်ကို လိုက်ချင်းပဲ။ ချစ်တယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတာ ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် တစ်ခါတစ်ရံမှာ အဲဒီအချစ်ကြောင့်ပဲ ဘ၀ပျက်ရတဲ့မိန်းကလေးတွေအများကြီးပဲ ၊ အဓိကကတော့ ကိုယ်ကမိန်းကလေးဖြစ်နေလို့ပဲလေ၊ ယောက်ကျားအများစုက (ငါအပါအ၀င်ပေါ့) အခွင့်ယူချင်တတ်ကြတယ်၊ ဒါကလဲ ကိုယ်ဘက်ကပြုမူဆက်ဆံတဲ့အပေါ်မှာလဲအများကြီးမူတည်တယ်လေ၊ နောက်တစ်ခုက မိန်းကလေးအများစုဟာ အလှအပကြိုက်ကြတယ် ဒါက သဘာဝပဲလေ ဒါပေမယ့် သဘာဝထက်လွန်ကဲရင်တော့ ဒုက္ခရောက်တတ်တယ် ကိုယ့်မှာရှိနေတာနဲပဲ လှပအောင်ဝတ် လှအောင်နေလို့ရတာပဲ၊ အဲဒီလိုနေနိုင်အောင်လဲကြိုးစားရမယ်။ ကိုယ်မှာရှိတဲ့ပိုက်ဆံထက် ပိုပြီးတော့လိုချင်ရင်တော့ ဒုက္ခရောက်ဖို့လမ်းကို ရှာသလိုဖြစ်နေတော့မယ်။
နောက်ဆုံးအောင်မြင်ဖို့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်ရတဲ့ဝင်ငွေ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ဝင်ငွေ (၀င်ငွေ/ရငွေကို) ဘယ်လိုအသုံးချမလဲ၊ ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာ စဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်။ လိုအပ်တာကိုလည်း ၀ယ်ဖို့လိုအပ်သလို မ၀ယ်သင့်ရှောင်ကြဉ်သင့်တဲ့အရာတွေကိုလည်း ရှောင်ကြဉ်ရမယ်လေ ။ အဓိကကတော့ အသုံးနဲ့အဖြုန်းကို သေသေချာချာ နားလည်ဖို့စဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ် ။
နောက်တစ်ခုက ကျန်းမာရေးကိုလည်း ဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်တယ် ၊ ကိုယ်လိုအပ်တာတွေရဖို့ အောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်လဲ ကျန်းမာရေးကို လိုက်စားဖို့လိုအပ်တယ်။ အဓိကကတော့ပုံမှန်အိပ် ပုံမှန်စားပေါ့ ၊ ကိုယ်ကအမြဲတမ်းထိုင်ပြီးအလုပ်လုပ်ရတဲ့သူဆိုရင်နံနက်ဖြစ်စေ ညနေဖြစ်စေ လမ်းလျှောက်ဖို့လိုအပ်တယ်။
ကိုရီးယားစကားပုံလိုပြောရရင်တော့ “ ကိုယ်ကျရှုံးလဲကျခဲ့ရင် အဲင်္ဒီလဲကျတဲ့နေရာကပဲ ကိုယ့်ဟာကို ထနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်´´ နောက်ပြီး ကိုယ်ကျရှုံးခဲ့တာတွေကို မေ့ဖျောက်ပြီး ဘ၀သစ်ကို ထူထောင်အောင်ကြိုးစားရမယ်လေ၊ လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင် အတိတ်ဆိုတာရှိစမြဲပဲလေ။ ဒါပေမယ့်ကိုယ့် ဘ၀တိုးတတ်ချင်ရင်တော့ အဲဒီမကောင်းခဲ့တဲ့အတိတ်တွေအားလုံးကို မေ့ဖျောက်ပြီး အခုလက်ရှိဘ၀ကို သေသေချာချာကြိုးစားပြီးဘ၀ကိုတည်ဆောက်ကြပါ။
အောငျမွငျခွငျးအတှကျ စိတျခှနျအားပေးတဲ့စာတဈပုဒျ (unicode)
အခုငါဘယျဘ၀ရောကျနတောလဲ ? အခုငါသုံးနတေဲ့ငှဟော ငါ့ဘဝနဲ့ကိုကျရဲ့လား? ငါ့အလုပျဝငျငှနေဲ့ကိုကျရဲ့လား? ငါ့ဘဝနဲ့သငျ့တျောရဲ့လားဆိုတာကိုပေါ့၊
ကံ ခွငျးတူလြှငျ ဥာဏျရှိသူက အမွဲအနိုငျရတယျ၊ ဥာဏျခွငျးတူလြှငျ ဝိရိယရှိသူက အမွဲအနိုငျရတယျ၊ ဝီရိယရှိသူခွငျးတူလြှငျ စညျးကမျးရှိသူက အမွဲအနိုငျရတယျ၊ စညျးကမျးရှိသူခငျြးတူလြှငျ စတေနာရှိသူက အမွဲအနိုငျရတယျ၊ စတေနာရှိသူခွငျးတူလြှငျ ရိုးသားဖွောငျ့မတျသူက အမွဲအနိုငျရတယျ၊ ရိုးသားဖွောငျ့မတျသူခွငျးတူလြှငျ အပွောခြိုသာသူက အမွဲအနိုငျရတယျ၊ အပွောခြိုသာဖို့ဆိုရငျ မိမိမကျြနှာအမြားကွီးမူတညျတယျလေ ၊ ခြိုသာတဲ့မကျြနှာနဲ့ပွောဆိုဆကျဆံရငျ ၅၀% က အလိုလို အောငျမွငျပွီးသားပါ။
ဒါကွောငျ့ကိုယျလုပျခငျြတာမလုပျရရငျ လုပျရတဲ့အလုပျကိုအကောငျးဆုံးဖွဈအောငျကွိုးစားရမယျလေ အဲဒါဟာလူ့အရညျအခငျြးပဲပေါ့ ၊ အရအေတှကျတှဘေယျလောကျမြားမြား အရညျခငျြးမရှိလြှငျ အဲဒီလူရဲ့ဘဝဟာ အောငျမွငျဖျို့မလှယျပါဘူး ၊ နောကျပွီးစိတျဓာတျကိုလဲ မာကွောအောငျလကေ့ငျြ့ကွရမယျ ၊ ဥပမာပွောရရငျ သူ့အလိုလိုရှိနတေဲ့ (အပေါကျမရှိတဲ့) သဈသားတဈခုဟာ သူထကျမာကွောတဲ့သံ နဲ့တှလြေှ့ငျ နရောဖယျပေးကွရတယျ အဲဒါဟာဘာကိုပွသလဲဆိုရငျ မာကွောတဲ့အရာနဲ့တှရေ့ငျပြော့ ပွောငျးတဲ့အရာတှဟော အလိုလိုနောကျဆုပျပွီးသားဖွဈသှားကွတယျမဟုတျလား? ဒါဟာလောက နိယာမပဲလေ ၊
တဈခါတဈလေ အကောငျးဆုံးသူငယျခငျြးတှကွေောငျ့ ကိုယျ့ဘ၀ပွောငျးလဲတတျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲဒါဟာ အထောကျပံ့မြှသာပါပဲ အဓိကကတော့ ကိုယျဟာကိုကွိုးစားရမှာပဲလေ။ သူငယျခငျြးဆိုတာ အကောငျးအဆိုးကိုပဲ မြှဝခေံစားပေးလို့ရတယျ။ အဓိကကတော့ ကိုယျသာကိုပဲမဟုတျလား? ကိုယျအောငျမွငျရငျ ကိုယျကအဓိကပဲခံစားရတာ။ ကနျြတဲ့မိဘသူငယျခငျြးဆိုတာ အဖြားလောကျပါပဲ — ငါဝမျးနညျးပါတယျ“ ဆိုတာလောကျပဲပွောကွမှာလေ ၊ တကယျတော့ ကိုယျဟာကိုပဲခံစားရမှာပဲလေ မဟုတျလား?
Previous post ရှဉ့်ကလေးတစ်ကောင် ရှိခဲ့သည်
Next post ကမ္ဘာပေါ်က နေမ၀င်တဲ့ နိုင်ငံများ